Gadzirira Kukukudzira Kunobatsira NeBhokisiing Bitcoin Betting
Hapana mutambo unogona kuita kuti ufare uye kudanidzira nenzira yaungagona nayo muBo Boxing. Iwe unofunga kuti unofara nemhando dzose dzechikwata chakakandwa nemubati. Kuva rimwe remitambo yehondo yekare, Boxing yakanyatsoita mararamiro emitambo yekutengesa nyika. Kusiyana nemimwe mitambo, unyanzvi hweBhokisi hahuwanikwi mune imwe nhengo kana mukombe mukukwikwidza. Kunyange zvakadaro, iwe uchashamiswa nenhamba yevanhu vari muBhokisiing Bitcoin betting nhasi. Kutanga yako Boxing Bitcoin kubheta ruzivo, enda kune mitambo yepamitambo yekubheja nzvimbo dzinopa Bitcoin sports kusanganisira Bhokisi rakadai se: Betcoin, CloudBet, BetOnline, NitrogenSports, Lunarbets, VitalBet, CoinBet24, GTbets, Bovada, PowerBet, Pinnacle, StayBet, uye Heritage Sports. Sarudza bhuku rakanaka remitambo rinogona kukupa zvakanakisisa.
MuBhocking Bitcoin kutengesa, kune marudzi matatu emakwikwi ebhodhi iwe unogona kutengesa. Aya ndiwo mashizha eBo Boxing, Amateur Boxing, nemitambo yeOlympic uye Commonwealth. Bhokisi rinonyanya kukonzerwa pakati pevatatu ibasa reBo Boxing, umo vatengesi vanoisa Bitcoin wagers pane avo vanofunga kuti vachava vakakunda mutsara.
Bhokisi rekutengesa mazano
Ino inguva yako yekutanga kuyedza Boxing Bitcoin kubheja? Usanetseka kwete, heano mamwe maBoxing Bitcoin ekubheja matipi ayo anogona kukubatsira iwe kutanga. Kutanga tarisa kana iye boxer ari padyo nehukuru hwavo. Izvi zvinoreva chimiro chakasimba chemuviri wetsiva. Elite boxers vanowanzo kuve pamakore ekupedzisira makumi maviri kana makumi matatu ekutanga. Asi dzimwe nguva, haina chekuita nezera ravo. Iwe uchiri kuda kufunga nezvemitambo yavo ichangoburwa. Chechipiri, kana chako chekutanga chiri kuwana bitcoins, tora mukufunga kwakazara izvo zvipingaidzo. Chekupedzisira, edza zvese pre-mutambo kubheja uye kurarama-mukutamba kubheja kuti uone kuti ndeipi yakakodzera iwe. Usafunge kaviri uye zadza bankrolls yako pamwe nematcoins akawanda apo iwe uchitengesa pane zvakanakisisa mabhokisi ezana remakore rechi21st.